ရီယိုဟွန်ဒို မှ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် သို့ .. | မိုးချိုသင်း မှတ်တမ်း
ဖတ်ပြီးတော့ စိတ်ထဲမှာ တစ်မျိုးပဲ။ စိတ်မကောင်းသလိုလို...
တကယ်ပါ..ဆရာကြီး ရဲ့.. ရင်ထဲက..ခံစား ချက် တွေ ကို အတိုင်းသား မြင်.. ထပ်တူထပ်မျှ ခံစား လိုက် ရတယ်။ တနေ့ပေါ့လေ-
ချိုသင်းရေ။ တိုက်ဆိုင်မှုရှိတိုင်း လွမ်းမိပါတယ်။ KM
အမရေ… ဆရာကြီး တခြားတိုင်းပြည်ရောက်နေတုန်း မန္တလေးတက္ကသိုလ်လွမ်းတာလည်းမပြောနဲ့ မေမေဆို အခုအချိန်အထိ မန္တလေးတက္ကသိုလ်ကိုလွမ်းတုန်း။ ရေနီမြောင်းက အစ ရွှေမန်းဆောင်အဆုံး၊ အကြောင်းတွေ ပြောနေတုန်းပဲ။
ကဗျာကတော့ ဆရာကြီးရဲ့ ခံစားချက်ကို ထင်းနေအောင်မြင်ရပါတယ်…
ဧည့်သည်ကြီးလည်း မကြာမှီ အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှာပါ။ မနက်ဖြန် သို့မဟုတ်….
ဧည့်သည်ကြီး အိမ်အမြန်ပြန် ရောက် နိုင်ပါစေ
မျက်ရည်ကျတယ်ဗျာ... ဒါပဲ ပြောနိုင်တော့တယ်
အဖေနဲ့ သမီးကြားက အင်မတန် နူးညံ့သိမ်မွေ့ တဲ့မေတ္တာတရားကို လွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ်ရသွားတယ်..ရှားပါးကဗျာလေးဖတ်ခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးလဲတင်တယ်။
ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကချင်လွယ်အိတ်ကလေး လွယ်လွယ်ထားတဲ့ မြန်မာ identity မပျောက်တဲ့ဆရာကြီးကို လေးလဲလေးစား၊ နှမျောလဲနှမျောသွားတယ်။
ဟိုးဝေးဝေး မိုင်တွေထောင်ချီ ဝေးတဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဖက်အခြမ်း ကနေ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် က ကျောင်းသားတွေ အဖြစ် ကိုလှမ်းမျှော် ရင်း မျက်ရည်ကျခဲ့ ရတဲ့ဆရာကြီး ရဲ့ အရိုးအိုးလေးက နေရာမှန် မြန်မာပြည်မှာပဲအမှန်တော့ အထိမ်းအမှတ် ကျောက်ရုပ် ကျောက်တိုင်စိုက်ထူပြီး တခမ်းတနား ဂုဏ်ပြုထားရမှာပါ။မြန်မာစာပေလောက အတွက်သာမက၊ မြန်မာကလေးတွေစာတတ်ဖို့ ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးဂုဏ်က နည်းမှမနည်းပဲကိုး..
ဧည့်သည်ကြီးအိမ်မြန်မြန်ပြန်ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ် မမိုးချိုသင်းရေ
i miss Sayagyi.
အမ.. ဖတ်ပီး ၀မ်းနည်းမိတယ် ။ တချိန်တည်းမှာ ကဗျာကို အပြည့်အ၀ ခံစားသွားပါတယ် ။
သူလို နာမည်ကြီူး ကတို.ကို ကြ်ုက်တယ်ဆိုတော.ဝမ်းသာလိုက်တာ thank you
်ဦးတင်မိုးကို ၂ခါအပြင်မှာ မြင်ဘူးတယ်။ London မှာပေါ့။ ပုဆိုးနဲ့ လွယ်အိတ်နဲ့ ဆေးလိပ်တိုလက်ကြားညှပ်လို့ အမြင်က Unique ဖြစ်နေတာအမှန်ပဲ။
ဖတ်ပြီးတော့ ရင်ထဲမှာ တစ်မျိုးပဲ။
ဟုတ်တယ်.....မြန်မာအပေါင်း တကယ်ဘဲ ကံကြမ္မာကောင်းကြပါစေတော့...လို့ဘဲ ဆုတောင်းရတော့မှာပေါ့ဗျာ။ ကံဆိုးခဲ့ရတာ နှစ်တွေလည်း ကြာခဲ့ပြီကိုး။ ဆုတောင်းရုံသက်သက်နဲ့ ပြည့်ချင်မှလည်း ပြည့်မှာမို့ ကိုယ့်သားကိုယ့်မြေးကိုယ့်မြစ် နောင်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် အမွေကောင်းကောင်းပေးချင်ရင် ကိုယ့်လက်ထက်မှာကတည်းက ကိုယ်တတ်စွမ်းသမျှ ကြိုးစားကြတာပေါ့။
Nice Poem & Very Much Touching...!!!
Really touching!!! I strongly believe that Syar Gyi will be rest in peace soon.
I visit ur blog2times hoping new post.
Aren't u free 2day?
ဆရာကြီးကို ထာဝစဉ် ရိုသေလေးစားစွာ ဦးချကန်တော့ လျှက်ပါခင်ဗျာ ...
ကျနော်ဟာ ဆရာကြီးရဲ့ ပျိုးခင်းတေးသံနဲ့ မြန်မာစာကို စတတ်ခဲ့တာပါ
ကျနော်တို့ရင်ထဲမှာ ဆရာကြီးဟာ ထာဝရရှင်သန်နေမှာပါ
ချိုသင်းတော့ ပျော်နေပြီ ဘလော့လောကမှာ စီဗုံးတပ်တော့လေ...။
အစ်မရယ်။ အစ်မပို့စ်လေးကိုဖတ်ပြီးတော့ဆရာကြီးကို သတိရစိတ်နဲ့ မျက်ရည်ကျမိတယ်။ ဆရာကြီးကို လန်ဒန်မှာ ကန်တော့နှုတ်ဆက်တုန်းကလေ “ငါ့သမီး။ ကြိုးစား၊ ကြိုးစား” ဆိုပြီး အားပေးခဲ့တာကို ဒီတသက်မေ့နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဧည့်သည်ကြီးအိမ်အမြန်ပြန်ရောက်နိုင်အောင် ကျွန်မတို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပါ့မယ်အစ်မရယ်။
ဗမာပြည်ပြန်ပြီးအဲ့သလိုပျော်စရာတွေ၊ရယ်စရာတွေပြောနေချင်တယ်။ ခုတော့လည်းအလွမ်းဖြေသလိုမျိုးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာလမ်းလျှောက်ရင်းတခုခုဟာနေသလိုမျိုးပဲ။ လွမ်းရတာတောင်တထင့်ထင့်နဲ့။
ဆရာကြီးလို စိတ်မျိုး မြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်သူတွေထဲက တစ်ဝက်မှာပဲရှိအုံး သမီးတို့တွေ ကိုယ့်တိုင်းပြည်မှာ အေးအေးဆေးဆေး ပျော်ပျော်လေး နေနိုင်မှာ နော်
ဆရာကြီးလိုကောင်းတဲ့လူတွေလဲ အနားယူသွားကြပြီ မကောင်းတဲ့လူတွေကလဲ ရှင်သန်ဆဲပဲ အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားသူချင်းလဲ နားလည်မှုတွေလွဲနေတယ် ရွှေပြည်တော် မျှော်လေတိုင်းဝေး ဖြစ်နေပြီ
မ ရေ… ငိုမိတယ်… လွမ်းမိတယ်… တမ်းတမိတယ်…
Nay Paing Oo said...
အမရေ ကျွန်တော်ဘလော့တွေလိုက်ဖတ်တာ တော်တော်များသလို တော်တော်လဲကြာနေပါပြီ ကိုယ်တိုင်တော့မရေးနိုင်သေးပါ ဒါပေမဲ့ စာတပုဒ်ကို ဖတ်ပြီးမျက်ရေကျမိတာဒါပထမဆုံးပါ ဒါကြောင့်ဘယ်ဘလော့မှာမှ မရေးဖူးတဲ့ ပထမဆုံး ကော်မန်ဝင်ရေးလိုက်တာပါ
now i writing this comment at the same time my tears are out because of your's father care ualot also his loneliness. I miss himalot him and his poems. Now in our country, less o really creativity artists are very less already. At the same time, i would like to say please don't stop on your blogging. I really admire ur literature because simple and clear. You can comment me i can not adapt on high class literature, but do not know i really like clear and simple..... thank....
ဆရာကြီးရဲ့ ကဗျာလေး ထိတယ်ဗျာ။
"တို့ နိုင်ငံ တို့ တက္ကသိုလ်မှာ
အဲဒီ့ အပိုဒ်လေး ဖတ်ပြီး အရမ်းဝမ်းနည်းမိတယ်။
အမရေ...ဒီ post လေးဖတ်ပြီး ကျွန်မမှာ ငိုလိုက်ရတာ...။
i can read this comment,
now i crying.......please i will try , i can seen one day ...hoping your father..